ဆက်သွယ်ရေးတိုင်စိုက်ထူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပါရစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ဆက်သွယ်ရေးတိုင်စိုက်ထူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပါရစေ
Posted by ပန်း စံပါယ် on Nov 7, 2014 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Think Tank |6comments
ဆက်သွယ်ရေးတိုင် စိုက်ထူရာမှာ ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင် လူတွေနေတဲ့နေရာနဲ့ အနည်းဆုံး ဘယ်လောက်အကွာအဝေးမှာ စိုက်ထူသင့်ပါသလဲ။ လူနေရပ်ကွက်ထဲမှာ စိုက်ထူသင့် မသင့် စိုက်ထူခွင့်ရှိ မရှိ သိတဲ့သူများ မျှဝေပေးပါ။
Wireless တွေ Mobile ဖုန်း တွေ က ဒီနေ့ကာလမှာ လူတိုင်း မရှိမဖြစ် သုံးနေရတာမို့ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
နားမလည် မကျွမ်းဝင်တဲ့ field မို့ သိသူ ဗဟုသုတ ရှိသူများရဲ့ စကား ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အဲဒီ တာဝါတိုင် တွေ နဲ့ နီး ရင် ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက် တယ်လို့ တော့ ကြားဖူးပါတယ်။
အဲဒီ တာဝါတိုင် တွေ နဲ့ ဝေးရင်လဲ connection တွေ မရ၊ line ပြတ် တာလဲ ကြုံဖူး တယ်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တွေ ကတော့ ဒီလို လူ့ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းဖို့ ကြားမှာ အကောင်းဆုံး စဉ်းစားပေးမှာပါ။
ဒါသူတို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစွမ်းပေါ့။
ရွှေပြည်ထဲ မှာတော့ သူတို့ အစွမ်းရှိမရှိ၊ သုံးခွင့်ရမရတော့ မသိ။
ယူအက်စ်ကတော့.. ဘာမှမဖြစ်ပါဟု.. ဆိုပါတယ်..။
ယူအက်စ်ရဲ့ အိမ်တွေကြား… တာဝါတိုင်တွေရှိပါတယ်..။
မြန်မာပြည်က.. ဝေ့ဗ်တွေက.. ဘယ်လှိုင်းတွေနဲ့…သုံးနေမှန်းတော့မသိ…။
ယေဘုယျအားဖြင့်.. အိုကေစိုပြေ.. မြေပိုင်ရှင်.ငွေရထင်ပါကြောင်း…
The3expert agencies that usually classify cancer-causing exposures (carcinogens) – the International Agency for Research on Cancer (IARC), the National Toxicology Program (NTP), and the US Environmental Protection Agency (EPA) – have not classified cell phone towers as to their cancer-causing potential.
“Exposure to radio frequency (RF) radiation has climbed rapidly with the advent of cell phones and other wireless technologies. Studies of the link between exposure to RF and to electric and magnetic frequency (EMF) radiation have found RF and EMF to be ‘potential carcinogens,’ but the data linking RF and EMF to cancer is not conclusive. World wide, health physicists (scientists who study the biological effects of radiation) continue to study the issue.”
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ပေါ်ဂါစ ဘာမှမဖြစ်ပြောတာဗဲစ်.. ခုတော့အဲဒီရေဒီယိုလှိုင်းတွေက ကင်ဆာဖြစ်မှန်း သိကုန်ဂျပီ.. သေချာအောင် စောင့်လိုက်ဦး အနှစ်၂၀လောက်။ အဲကြမှ ကင်ဆာဆေးရုံမှာ ထပ်ဆွေးနွေးဂျမဲလေ..။
အနော် သိသလောက် လျှာရှည်ရရင်တော့… တာဝါတိုင်စိုက်မယ့် မြေပိုင်ရှင် ထောတယ်.. ဘေးက အကွက်တွေကတော့ ဈေး အ သွားတယ်.. ဘာကြောင့်ရယ်တော့ မသိ.. မြန်မာပြည်မှာ မ၀ယ်ကြတော့ပါ… လူနေရပ်ကွက်ထဲဆိုတော့ မပြောတတ်ပေမဲ့.. မနေသေးတဲ့ အကွက်ဖော်နေရာတွေ ( ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ) တို့မှာတော့ ပတ်ပတ်လည် အကွက်တွေ အ၀ယ်မရှိ.. ရှိလဲ ဈေးနှိမ်ခံရပါတယ်..
အခုလို မျှဝေပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။